Ogaden News Agency (ONA) – Faarax Macalin waa nin mabda’a leh oon ka waabanin xaqqa
Faarax Macalin waa nin mabda’a leh oon ka waabanin xaqqa
Mudane Farax Macallin oo ah Ku-Xigeenka Afhayeenka Baarlamaanka dalka Kenya, wuxuu caan ku yaahay inuusan xaqqa uga waabanin masaalixdiisa shaqsiga ah. Waxaa la odhan karaa waa shaqsiga kaliyah oo ka mid ah siyaasiyiinta umadda Somaliyeed meel ay jootaba oo aan mabadiida uu aamnisan yahay uga leexanin kursi iyo mansab jacayl iyo maslaxad shaqsi ah oo uu kula gorgortamo dawladaha danta ka leh Somaliya. Wuxuu sharaf iyo meeqaanba dheer yahay kuwa badan oon waxbaba haysanin oo hadana u gurguuranaya gumaysiga Itobiya say xoogaa shilimaad ah uga soo qaataan ka dibna been loo soo dhiibay ka faafiya TV-yada gumaysiga. Wuxuu sidoo kale sharaf iyo meeqaanba dheeryahay qaar sheeganaya culumanimo oo diintoodii dhaafsaday maslaxad aduun oo sidaa ku seegay sharaftii ay ku dhex lahaayeen umadda.
Wareysiga dheer ee TV-ga dalka Kenya K24 ay la yeelatay Mudane Farax Macallin wuxuu kaga hadlay arima badan oo quseeya dalalka Geeska Afrika iyo siyaasadda dibadda ee dalka Kenya oo uu yidhi waxaa afduubatay Itobiya. Wuxuu sheegay mudane Farax Macallin in siyaasada dibadda ee Kenya ay noqotay mid u xaglisa Itobiya oo aan ka madax banaanayn, sidoo kalena ururka IGAD uu yahay haya’d ay Itobiya ku shaqaysato. Waxyaabaha uu soo qaatay markuu ka hadlayay siyaasadda dibadda ee Kenya waxaa ka mid ahaa sida ay Kenya uga leexatay dhex-dhexaadnimadii looga baahnaa arimaha quseeya Itobiya iyo Eritrea, isagoo sheegay inay Kenya u xaglisay Itobiya meeshii laga rabay inay labadaa dawladood oo labadaba xidhiidh la leh Kenya inay isugu yeedho oy dhex-dhexaadiso. Waxyaabaha uu tusaale ahaan u soo qaatay waxaa kamid ahaa inay Kenya been loo soo dhiibay la booday oo ahayd in dalka Eritrea ay ka dajisay Baydhabo 3ex dayaradood oo hub u sida Shabaabka, arintaasoo ay Qaramada Midoobay sheegtay inaysan waxba ka jirin hasa ahaatee ay ilaa maanta Arimaha Dibadda ee Kenya daba socoto taasoo buu yidhi mudane faarax Macallin waxay ceeb iyo fadeexad ku tahay siyaasadda Kenya.
Arimaha uu sida aadka uga hadlay wareysigaa waxaa ka mid ah qadiyadda Ogadenya oo Mr. Jeff Koingange oo wareysanaya oo aadka ugu riyaaqay geesinamada Mudane Farax Macalin iyo sida aanu runta marnaba uga leexanin. Wuxuu sheegay inay Ogadenya taariikh ahaan tahay dal la gumaysto, isagoo xusay in aan la’isku khaldin arinta NFD iyo Ogadenya, sababtoo ah buu yidhi, shacabka Kenya waxaa wada gumaysanayay Boqortooyada Ingriiska oy ka qaateen xoriyadooda, meesha ay Itobiya ka mid ahayd dawladihii ka qayb galay shirkii Berlin ee lagu qaybsaday Afrika oo sidaa ay qaybteedii ku heshay. Itobiya waxay ahayd buu yidhi mudane Farax Macallin dawlad gumaysi oo ka qaybgashay boobkii Afrika lagu gumaysanayay. Sidaa darteed ayay shacabka Ogadenya waxay sheeganayaan inay yihiin dalkii ugu dambeeyay ee Afrika gumaysiga ku hadhay, waxayna doonayaan inay ka xoroobaan gumaysiga siday uga xoroobeen dadka madowga ah ee Koonfur Afrika, oy uga xoroobeen gumaysigii haystay shacabka Nambiya. Xaqna way u leeyhiin arintaa ayuu yidhi mudane Farax Macallin.
Waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah; heshiiskii ay wada saxiixdeen Kenya iyo Itobiya oo Boqor Xayle Selassi iyo Jommo Kenyata oo saaxiiba ahaa ay iskaga gaashaan-buursanyeen Somaliya. Heshiiskaa wuxuu dhigayay buu yidhi in haddii Somaliya ay ku soo duusho Kenya ama Itobiya uu dalka kale dagaalka la soo galo. Arintii noocaa ahayd way dhamaatay buu yidhi hadda Faarax macallin, sababtoo ah Qarankii Somaliyeed wuu burburay, Somaliya raadinaysa Somali weyna ma jirto hadda oo iyadii ayaaba kala qaybsan.
Wareysiga taariikhiga ah, wuxuu ku muujiyay Mudane Faarax Macallin inuu yahay nin siyaasi ah, aqoon fiican u leh taariikhda iyo arimaha Geeska Afrika, oon diyaar u ahayn inuu mabada’iisa gor-gortan galiyo.
Halkan ka dhegayso wareysigan taariikhiga ah ee xiisaha leh: